कतिपटक गर्ने यौन सम्पर्क ? | नेपाल आज
कतिपटक गर्ने यौन सम्पर्क ?
आइतबार, २८ माघ २०७४ गते प्रकाशित
कतिपटक गर्ने भन्ने कुनै स्थापित मान्यता छैन मानिसहरु शारिरिक आवश्यक्ता अनुसार यौन–सम्पर्क गर्ने गर्दछन् । तर अध्ययनहरुले भने सातामा तीनपटक यौन–सम्पर्क गर्न उत्तम हुने देखाएको छ ।
सातामा तीन पटक यौन–सम्पर्क गर्दा सेक्स प्रति वितृष्णा नजाग्ने र यौन आकर्षणलाई ताजा राख्न मद्दत पुग्ने अध्ययनहरुबाट पत्ता लागेको छ ।अनुशन्धानहरुले विहानको साढे ७ बजेलाई यौन–सम्पर्क गर्ने उपयुक्त रहेको पत्ता लगाएका छन् ।
इटलीमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार यो समयमा शरिरमा सेक्स हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न हुने भएकोले विहानै ओछ्यानमा ७ बजेर ३० मिनेटमा यौन–सम्पर्क गर्न सुरु गर्दा अति उत्तम हुन्छ । यतिमात्रै होइन विहानको यौन–सम्पर्कले दुबैजनालाई दिनभरी थकान महसुस नहुने, दिमाग तिक्ष्ण र दिनभर ताजगी महशुष हुने बताइएको छ ।
विहानको साढे ७ बजेलाई यौन–सम्पर्क गर्ने उपयुक्त रहेको पत्ता लगाएका छन् । इटलीमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार यो समयमा शरिरमा सेक्स हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न हुने भएकोले विहानै ओछ्यानमा ७ बजेर ३० मिनेटमा सेक्स गर्न सुरु गर्दा अति उत्तम हुन्छ ।
यतिमात्रै होइन विहानको सेक्सले दुबैजनालाई दिनभरी थकान महसुस नहुने, दिमाग तिक्ष्ण र दिनभर ताजगी महशुष हुने बताइएको छ ।
नुवाकोट मिनीट्रक दुर्घटनाः मृतकको संख्या २० पुग्यो
अमेरिकामामसेत सुरक्षित छैनन् नेपाली
गोरु काट्दै गरेको अवस्थामा १० जना पक्राउ